Indlu yaseTatehata. Isauna yabucala. Ibhafu yangaphandle.
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguHana
Le ndlu incinci yanamhlanje yakhiwa ngo-1968 kwaye ihlala ngaphakathi kwamahlathi eNtaba iAsama yaseKitakaruizawa. Ekuqaleni yathathwa njengendawo yokuzifihla ngempelaveki yomyili odumileyo osebenzise le propati ukucamngca.
- Umzekelo ogciniweyo we-midcentury yaseJapan yesimanjemanje.
-Ilungele ukubaleka kwezothando, iimpelaveki zokuyila kunye nohambo losapho kwindalo.
- Ukuhamba kwehlathi elizolileyo.
-Imbali yendawo yeholide yekhaya ithandwa ngabaninzi bamagcisa abalaseleyo enkulungwane yama-20 eJapan, ababhali kunye nabenzi befilimu.
Ivunywe liphulo lokuya kuHambo. Nceda ubuze iinkcukacha ku-Airbnb.
IKhabhinethi yeHlathi yaseKaruizawa yakhawulwa ngasekupheleni kweminyaka yoo-1960 nguTatehata Yoshikado, umakhi odumileyo welo xesha. Umbono wakhe wawungowekhabhathi elula yale mihla ebonelela ngezinto eziyimfuneko kwiimpelaveki ezinoxolo kude nendalo.
Yakhelwe kwinduli encinci, ikhaya laliyilwe linamanqanaba amathathu adityanisiweyo, onke aneefestile ezinkulu ezivulekela ehlathini. Iisilingi, iikhabhinethi kunye neenkcukacha zenziwa ikakhulu kwi-teak. Ikhaya libonisa izinto eziqhelekileyo kwi-architecture yaseJapan kunye ne-modernism yaphakathi kwinkulungwane.
Indawo yokungena ivula kumgangatho ophakathi, indawo yokutyela encinci exutywe nekhitshi edibeneyo kodwa enomtsalane. Izinyuko zomthi zijika ukuya kumgangatho ophezulu, obonisa isitovu esikhulu sokhuni esenziwe ngokwesiko sikaTatehata kunye nekona yokufunda epholileyo enesofa kunye neefestile ezinkulu ezityibilikayo ezijonge phezulu emithini. Izinyuko zesibini ezisecaleni kwekhitshi zikhokelela kumgangatho osezantsi, apho kukho igumbi lokulala lesitayela saseJapan - iindonga zesamente ezimhlophe, umgangatho we-tatami, iingcango ezityibilikayo ze-fusuma, ukukhanya okuhle kunye neefutons zokulala ezitofotofo.
Ngasemva kwendlu inendawo yepatio elungele iibarbecue ezincinci kunye nokuphumla ngaphandle.
4.74 · Izimvo eziyi-47
I-Kitakaruiza ihleli kumphakamo oziimitha ezili-1,200, inika umoya opholileyo kunye nemozulu emnandi kulo lonke ihlobo. Ukuphuncuka okudumileyo kubushushu basehlotyeni obucinezelayo baseTokyo, lo mmandla uzele yimisebenzi yangaphandle kunye nezinto ezinomtsalane zendalo, kubandakanya nokunyuka intaba eNtabeni ye-Asama, iipaki zejoloji, iikhosi zegalufa kunye noluhlu lokuqhuba, iifama kunye nokuvelisa abathengisi, iindawo zokutyela ezintle kunye neekhefi, kwaye - kunjalo. - i-onsen eshushu.
Xa kuthelekiswa neKaruizawa yembali, ephuhliswe ngakumbi kwaye ifana neholide namhlanje, iKitakaruizawa inesitshixo esisezantsi kakhulu somtsalane ongathandekiyo.
Kodwa zininzi iindawo ezidumileyo ze-onsen kunye neeholide ezikufutshane, kubandakanya:
Central Karuizawa: 30 imizuzu ngemoto
IHarunire Terrace: imizuzu engama-20
UTsumagoi: imizuzu eli-15
Kusatsu Onsen: imizuzu engama-30
UManza Onsen: imizuzu engama-50
I-Azuma Valley: imizuzu engama-30
Indawo ekufutshane neKaruizawa Forest Cabin yayikhe yayindawo yeholide edumileyo yamagcisa amakhulu enkulungwane yenkulungwane yaseJapan, ababhali beencwadi, abaphengululi, abenzi befilimu kunye neembongi. Kukho ukuhamba okumnandi kunye nokukhwela ibhayisekile okufumaneka ezindleleni kunye neendlela ngaphandle kwendlu. Nceda uqonde ukuba le ndawo idume ngokuzola kwayo, i-ambiance ecamngcayo- zama ukuhlonipha wonke umntu onoxolo kunye nokuzola. Le yindawo yokudala, uthando okanye ixesha losapho elonwabileyo. Khange kubekho bantu bombutho please.
Emva kokugqiba iKaruizawa Forest Cabin ngo-1968, uTatehata-san wayila amakhaya amabini angabamelwane abahlobo - omnye umbhali odumileyo, omnye ngumdlali wefilimu. Ezo zindlu zazakhiwe ngohlobo olufanayo lwe-rustic kodwa olucocekileyo, ukudala imvakalelo yemvisiswano ebonakalayo phakathi kwabamelwane.
Inombolo yomthetho: M100018431